Tababar Ufurmay Shaqaalaha Jaamcada Jigjiga - Cakaara News
Tababar Ufurmay Shaqaalaha Jaamcada Jigjiga
Jigjiga(cakaaranews)isniin 19ka September 2016. Sidaad wararkayagii hore kulasocoteen waxaa saaka si habsami leh uga bilowday hoolka shirarka ee Kaali tababar socon doona mudo todobaad ah oo loo qabtay mas’uuliyiinta, macalimiinta iyo waliba shaqaalaha jaamacada jigjiga.
Tababarkan oo ay ujeedadiisu ahayd dood cilmiyeed lagu soo bandhigayay sooyaalkii taariikheed iyo isbadaladii horumarineed ee uu dalku soo maray 25kii sano ee lasoo dhaafay iyo gaar ahaan deeegaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo Madaxwaynaha DDSI ahna gudoomiyaha boardga jaamacada jigjiga mudane Cabdi maxamuud Cumar, Afhayeenka golaha Baarlamaanka DDSI ahna Gudooomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, Madaxwayne Kuxigeenka ahna Wasiirka Xafiiska Horumarinta Beeraha iyo Khayraadka Dabiiciga ah marwo Sucaad Axmed Faarax, madaxwayne kuxigeeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada DDSI mudane Mowliid Haayir Xasan, mas’uuliyiinta, macalimiinta iyo waliba shaqaalaha jaamacada jigjiga.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo furay tababarkan ayaa kawarbixiyay sooyaalkii taariikheed ee dalka 25kii sano ee udanbaysay iyo faraqa udhexeeya itoobiyadii shalay iyo itoobiyada cusub ee maanta. Wuxuuna sharaxaad dheer kabixiyay sooyaalkii taariikheed ee gaar ahaan deegaanku soo maray iyo isbadalada laxaadka leh ee wakhti gaaban gudihii lagu gaadhay. Madaxwaynaha ayaana intaa kudaray, in nidaamka federalismka ah ee dalka oo kudhisan dimoqraadiyad, sinaan, cadaalad iyo dastuurka oo kali ah ay yihiin kuwa ay itoobiya kusii jiri karto balse nidaamyadii laga soo gudbay ee uu gabbalkoodu dhacay ee boqortooyada iyo gumaysiga kusalaysnaa ee ay rabaan inay Onag, ginboot7 iyo Ubbo ay dib ugu soo celiyaan wadanka aysan marnaba macquul ahayn islamarkaana aysan usuurtagalaynin habayaraatee oo ay hadhkoo cad riyoonayaan.
Kadibna, waxaa lasoo jeediyay jadwalkii geedi-socodka tababarkan iyadoo qadadii kadibna lasoo bandhigay filim documentary ah oo katurjumaya xaqiiqada taariikhda deegaanku soo maray.
Ugudanbayna, kaqaybgalayaasha tababarkan ayaa daawasho kadib kahadlay dareenkooda ku aadan sooyaalka deegaanka iyagoo bogaadiyay isbadalka iyo waxqabadka balaadhan ee mudo gaaban gudaheed lagu keenay islamarkaana tilmaamay in isbadalkani uu kuyimid oo kali ah kago’naanshiyaha hogaaminta deegaanka iyo taageerada xukuumada dhexe. Waxayna kamahadeliyeen waxqabadka horumarineed, nabadgelyo iyo maamul suuban ee uu deegaanku gaadhay iyagoo sheegay in shaqsiyaad fadhi-kudirir ah sida: ginboot7, onag iyo ubbo toona aysan itoobiya waxba yeeli Karin.